सपनामा खाएको देख्यो भने के हुन्छ ? | Nepal Online Patrika
Home रोचक सपनामा खाएको देख्यो भने के हुन्छ ?
सपनामा खाएको देख्यो भने के हुन्छ ?
Nepal Online Patrika: तपाईंले सपना त पक्कै देखिरहनुभएको होला । कहिले हामी राम्रो सपना देख्ने गर्छौं भने कहिले नराम्रो सपना देखेर तर्सिने गर्छौं ।
यदि सपनामा खाएको देखियो भने के हुन्छ भन्ने पनि धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । आज हामीले खाएको सपना देख्दा के हुन्छ भन्नेबारे जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
यदि तपाईंले सपनामा आइसक्रिम खाएको देख्नुभयो भने त्यसको अर्थ तपाईंको जीवनमा सुख तथा समृद्धि आउने विश्वास छ ।
यस्तै सपनामा आँप खाएको देख्नुभयो भने धनसम्पत्ति तथा सन्तान प्राप्त हुने विश्वास छ । अचार खाएको देख्नुभयो भने तपाईंलाई पेट या टाउको दुख्न सक्छ ।
अमला खाएको देख्दा भने तपाईंको मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
यदि सपनामा अमिलो खानुभयो भने पुरुषका लागि अशुभ मानिन्छ तर महिलालाई भने राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ ।
आफूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यी कुरा अपनाउनुहोस्:
क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ:
मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ:
तनाव कम हुन्छ:
आजभोली हामीले कैयौं यस्ता रोगहरुको सामना गर्नुपरेको छ जसको बारेमा हामीले कहिल्यै पनि सुनेका थिएनौं । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो हाम्रो जीवनशैली र चौबिसै घन्टा स्ट्रेसमा रहने दैनिकी । यदि सही ढंगले योगा र ध्यान गर्ने हो भने हाम्रो जिन्दगीबाट तनाव भाग्छ । अर्थात यो एक यस्तो एन्टिडिपि्रसेन्ट हो जसले फाइदा नै फाइदा गर्छ । ध्यान र योगाको प्रक्रियामा हामीले लामो गहिरो सास लिन्छौं र साथै शरीरको स्लो मुभमेन्ट पनि हुन्छ ।
अध्ययनबाट योगा र मेडिटेसन प्राक्टिसले हाम्रो खानपानको बानी पनि सुधार्ने तथ्य पनि अगाडि आएको छ । नियमित योगा गर्ने बानीले हाम्रो रुची स्वस्थ खानाको तर्फ बढ्न लाग्छ । आहार सुधार हुन्छ मानिस खुसी हुन थाल्छ । यसले आत्मविश्वास पनि बढ्छ र आफ्नो शरीरको ख्याल राख्ने इच्छा पनि बढ्छ ।
शरीरको लचकता बढ्छ:
हामीलाई व्यस्तताको कारण व्यायाम गर्ने समय पनि मिल्दैन । तर, यदि थोरै समय मिलाए। हामीले आफ्नो शरीरमा ध्यान दिने हो भने यसको फाइदा हामीलाई नै हुन्छ । दैनिक थोरै समयसम्म योगा र ध्यान गर्नाले शरीरको लचकतामात्रै बढ्दैन बरु कार्यालयको काम गर्ने उत्साह र जाँगर पनि बढ्छ ।
Previous articleरक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि नेपालको अनुमति खोज्दै भारत
Next articleशरीरको कुन अंगमा कोठी भएका व्यक्ति कस्तो हुन्छन ?